Semalt: Nei Chinyorwa Chitsva Chikosha KwaWebsite Yako uye SEO
Kutaura zvazviri, kutsvaga injini kunobatsira zvikuru sei mawebsite anofanira kunge ariyakavakwa. Kazhinji injini dzekutsvaga dziri kuisa kusimbisa kunaka kwehupenyuuye inovandudza periodicity. Nokudaro, kuti urambe wakabatana, iwe unofanirwa kudzokorora zviri mukati makokazhinji. Julia Vashneva, Mutevedzeri weMuteresi weKatendi we Semalt Digital Services,rinotsanangura kuti nei zvinyorwa zvitsva ndicho chinhu chikuru chinoita kuti webhusaiti yako ipindure.
1. Vanowanzopamba Nokutsvaga Injini
Kana webhusaiti yako ichinyorwa patsva nemashoko matsva uye mapepa, tsvaga yekutsvagavanocheka vachashanyira nzvimbo iyo nguva nenguva. Icho chinoreva kuti indexation ye site yako ichaendanekukurumidza. Apo injini dzinoshanyira nzvimbo yako nguva dzose, unogona kuwana mazinga akakwirirakana zviri mukati mako zvakakosha. Pose paunowedzera zvitsva pawebsite yako, injini yekutsvagatora zvinyorwa izvi uye gadzirisa kusarudzwa kwewebsite yako. Saka, shandisa webhusaiti yakonguva dzose kuwedzera mikana yekuwana nzvimbo yakakwirira.
2. Kuwedzerwa kweWebsite Authority Authority Potential
Nzira yakakosha yekuwedzera simba rewebsite yako irikugadzira zvakawanda zviri mukati.Nyora zvinyorwa zvinokosha, zvinyorwa-zve-zvinyorwa, uye iwe zvechokwadi uchapa site yako achiremera chikuru chinogona..Kana iwe ukadzokorora magwaro masimba panzvimbo yako, iwevachaziva kuti vane zviuru zvemapeji akanyorwa neGoogle. Kana iwe urivakatsunga kubatana nesangano ravo, saka iwe unofanira kutumira zvimwe zvakakodzerwa. Kana iwezvinowirirana mukunyora zvakawanda zvakagadzikana pane imwe nyaya, iwe uchawana mari kubvavanhu uye kutsvaga injini. Simba rechikwata chenzvimbo yako chichawedzera sezvaunowanakuvimba zvakanyanya. Kuvaka mukurumbira wako nekushanda pane zvekugarisana nhepfenyuro nemaforamu.
3. Zvimwe Zviri Mukati Zvinoreva Zvimwe Zvinyorwa
Paunenge uchigadzira zvinyorwa zvitsva nguva dzose, nzvimbo yako ichava nemashoko makuru. Nokusika keywordnyaya dzinotsanangurwa, iwe uchava nemukana wekutarisa kune vamwe vashanyi. Tsvaga injiniachazivawo nzvimbo yako uye anokutumira vamwe vashanyi. Kunyange zvazvo Google isingatangikurema kwakawanda pamusoro pehuwandu hwemashoko makuru pawebsite yako, zvichiri kukosha kuisakeywords in uye zvakapoteredza nyaya yako. Mashoko aya anoshandiswa nevanotsvaga injini kuratidza yakosite based on subject matter. Yeuka kusaisa chinhu chako neshoko rinokosha seizviichakwezva zvikwangwani fomu kutsvaga injini.
4. Chengetedza Vaverengi Vako Kuziviswa
Kuvandudzwa nguva dzose kuchaita kuti vanyori vako nevashanyi vawedzere kune zviitiko nezviitikomune yako yebhizimisi. Zvinyorwa zvitsva zvine simba rekushandura vashanyi vatsva kuva vatengi.Nokudhinda ruzivo rutsva nguva dzose, iwe uchachengeta vateereri vako vachibatana. Izvi zvichaitakukubhadhara kwenguva yakareba nekuvimbika kubva kune vatengi, uye naizvozvo nzvimbo yako ichakura mukuzivikanwa uyeranking. Ipa vashandi vako zvine ruzivo rwakagutsa pamusoro pezvinhu zvako zvekutengeserana.Taurira vashanyi vako pamusoro pekubatsira kwezvigadzirwa zvako uye nei vachizvida. Apo iwekupa ruzivo rwakakwana kune vanotengesa vatengi, unovabatsira kuti vasarudze zvakanaka,uye zvichida vachatenga zvigadzirwa zvako Source .